Rochak – Page 8 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
झर्रोटर्रो : भोकगीत : मिलुँ मिलुँ लाग्यो मलाई
रचना तथा स्वर : पुष्प+कमल थापा सङ्गीत : कैलुब्राह पुष्प : मिलुँ मिलुँ लाग्यो मलाई आफ्नै जस्तो त्यो तिम्रो दलैमा कमल : लौ हुलौँ हुलौँ लाग्यो मलाई पिरतीको रङ्गीन भेलैमा पुष्प : राज तन्त्र, गण तन्त्र दुबैमा छ…. तिम्रो गीत कमल : गाई खाने भैँसी पुज्ने गाई खाने भैँसी पुज्ने जताततै तिम्रो प्रित पुष्प : […]
ज्वाँई बने बापत मासिक ५ लाख पाउने भ्रम की सत्य
युरोपेली मुलुक आइसल्याण्डमा हालैका दिनहरुमो यो खबर निकै भाइरल बनिरहेको छ । जस अनुसार आइसल्याण्ड सरकारले त्यहाँका युवतीहरुसँग बिहे गर्ने विदेशी पुुरुषहरुलाई हरेक महिना ५ हजार डलर तलब दिनेछ । देशमा पुरुषको जनसंख्या घटिरहेका कारण समस्या उत्पन्न भएसँगै सरकारले पुरुष जनसंख्या बढाउन यसरी विदेशी तन्नेरीहरुलाई तलब नै दिएर ज्वाइँ बनाएर देशमा भित्राउने योजना बनाएको दाबी […]
अचम्म लाग्दो चीन, भवनकै बीचबाट कुदाइयो रेल
सामान्यतया रेल्वे लाइनको किनारामा घर हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, यहाँ यस्तो रेल्वे लाइनको कुरा हुँदैछ, जुन अपार्टमेन्टहरुलाई बीचैबाट छेडेर गएको छ । यस्तो काम आखिर चीनले बाहेक अरु कसले गर्न सक्छ । चीनको चोङकिङ इलाकामा रहेको विशाल भवनको बीचबाट रेल कुदिरहेको देख्न सकिन्छ । सुरुमा यहाँ रहेका भवनहरु भत्काएर रेल्वे लाइन निकाल्न आदेश […]
विरालोसँग बस्दाको फाइदाबारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक !
गर्भावस्थाका क्रममा या बचपनमा बिरालो पाल्नाले कुनै प्रकारका मानसिक विरामीको प्रत्यक्ष खतरा नहुने एक अध्ययनमा देखिएको छ । यो नयाँ अध्ययनमा पूर्वका अनुसन्धानमा प्रकट गरिएका आशंकालाई केन्द्रमा राखिएको थियो । जसमा बिरालोसँग बस्नाले मानसिक विरामीको खतरा बढी हुन्छ भनिएको थियो । पछिल्लो अनुसन्धानका भनिएको थियो कि विरालो राख्नाले कुनै प्रकारका मानसिक विकार उत्पन्न हुनसक्छ । […]
Posted in: Rochak, Technology
फेल्प्सले ओलम्पिकमा सफलता पाउनुका पछि यस्तो छ रहस्य
एजेन्सी । ओेलम्पिक इतिहासकै सबैभन्दा सफल पौडीबाज माइकल फेल्प्सले आफ्नो सफलताको रहस्य खोलेका छन् । उनले आफूले ओलम्पिकको इतिहासमै सबैभन्दा सफल खेलाडी बन्नका लागि स्विमिङ पुलमा अनगिन्ती घन्टाहरु विताएको बताएका छन् । यस्तै उनले ओच्छ्यानमा पनि सुतेर यसरी नै समय बिताएको उल्लेख गरे । फेल्प्सले आफ्नो ओलम्पिकमा जितेका २८ पदकका लागि प्रशिक्षणसँगै समान रुपमा ओच्छ्यानमा […]
Posted in: mainNews, Rochak, Sports
मापसे चेकिंग बाटो हिड्नेलाई पनि
गाडी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएको पत्ता लगाउन मापसे चेकिङ गरिन्छ । मापसे चेकिङमा केवल चालक मात्र पर्ने गरेका थिए र गाडीमा बस्ने अरुहा हा‘ गर्न लगाइन्न हामीकहाँ । अझ बाटो हिँड्ने बटुवाको मापसे चेकिंग त हुँदै हुन्न । तर नामिबियामा भने अब बाटो हिँड्ने पैदलयात्रीको समेत मापसे चेकिंग हुने भएको छ […]
यस्तो समुन्द्र जहाँ कोही डुब्दैन
पानीदेखि डराउने बानी हुन्छ कतिपयको । त्यसैले गहिरो पानीमा डुंगामा चढ्न पनि डराउँछन् कोही कोही त तर पृथ्वीमा एउटा यस्तो समुद्र छ जहाँ मानिस डुब्दैन र सजिलैसँग तैरिन सक्छ, पौडी नै नखेली नत लाइफ ज्याकेट नै लगाएर । जोर्डन र इजरायलको बिचमा पर्ने यो मृतसागर समुन्द्र संसारकै सबैभन्दा होँचो भाग पनि मानिन्छ, जहाँ हाम फाल्दा […]
यी बच्चीको शरीरमा उम्रिदैछ रुख ! यस्ताे हुनसक्छ खतरा
चार महिनाअघि जब १० वर्षीया शहाना खातुनको अनुहारमा रुखको जराजस्तो मुसा आउदा उनका बाबु त्यति चिन्तित थिएनन् । बंगलादेशको ग्रामीण इलाकामा बस्ने शहानाको अनुहारमा जब यो मुसा फैलिन लाग्यो तब उनका बाबुलाई चिन्ता भयो र उपचारका लागि राजधानी ढाका आए । शहाना ‘ट्रि म्यान सिन्ड्रोम’ बाट प्रभावित निकै कम मानिसमध्ये एक हुन् र यदि उनीमाथि […]
कानमा छेडेको दुलामा सर्प छिरेपछि…
एजेन्सी । अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा बस्ने एक महिलाको घरपालुवा पाइथन उनको कानको गहना लगाउने दुलाबाट निस्कने क्रममा अड्र्किको छ । ऐशली ग्लाईले आफ्नो फेसबुक पेजमा तस्बिर पोस्ट गरेकी छन्, जसमा कानमा सर्प छुण्डिरहेको देखिएको छ । उनले तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखेकी छन्, ‘अहिलेसम्मको मेरो जीवनको सबैभन्दा पागलपनले भरिएको समय, मेरो साप मेरो कानमा नै फस्यो […]